မဿဲ ၁၀ | အွန်လိုင်း သမ္မာကျမ်းစာ | ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်း
၁၀ ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးကို ခေါ်တော်မူပြီးလျှင် ညစ်ညူးသော နတ်တို့ကို နှင်ထုတ်ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ရောဂါ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးကို ပျောက်ကင်းစေခြင်းငှာလည်းကောင်း အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူ၏။ ၂ တမန်တော် တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးတို့၏အမည်ကား ပထမမှာ ပေတရု*ခေါ် ရှိမုန်နှင့် သူ၏ညီအန္ဒြေ၊ ဇေဗေဒဲ၏သား ယာကုပ်နှင့် သူ၏ညီယောဟန်၊ ၃ ဖိလိပ္ပု၊ ဗာသောလမဲ*၊ သောမ၊ အခွန်ခံမဿဲ*၊ အာလဖဲ၏သား ယာကုပ်၊ သဒ္ဒဲ*၊ ၄ တက်ကြွထက်သန်သူ ရှိမုန်၊ ကိုယ်တော်ကို အပ်နှံသောသူ ယုဒရှကာရုတ်တည်း။ ၅ ယေရှုသည် ထိုတစ်ဆယ့်နှစ်ပါးတို့ကို စေလွှတ်၍ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “လူမျိုးခြားတို့ရှိရာသို့ မသွားကြနှင့်။ ရှမာရိမြို့ထဲသို့ မဝင်ကြနှင့်။ ၆ သို့သော် အစ္စရေးလူမျိုး ပျောက်လွင့်သောသိုးများ ရှိရာသို့သာ သွားကြလော့။ ၇ သွားစဉ်တွင် ‘ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် တည်လုနီးပြီ’ ဟုဟောပြောကြလော့။ ၈ ဖျားနာသူတို့ကို ကျန်းမာစေကြလော့။ လူသေတို့ကို ထမြောက်စေကြလော့။ နူနာစွဲသူတို့ကို သန့်ရှင်းစေကြလော့။ နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်း နှင်ထုတ်ကြလော့။ သင်တို့သည် အခမဲ့ရကြသည်ဖြစ်၍ အခမဲ့ ပေးကမ်းကြလော့။ ၉ သင်တို့၏ ခါးပန်းအိတ်ထဲတွင် ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးတို့ကို မဆောင်ကြနှင့်။ ၁၀ လမ်းခရီးဖို့ ရိက္ခာအိတ်၊ အင်္ကျီနှစ်ထည်၊ ဖိနပ်၊ တောင်ဝှေးတို့ကို မဆောင်ကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား လုပ်သားသည် ရိက္ခာကို ရထိုက်ပေ၏။ ၁၁ “မည်သည့်မြို့ရွာကိုမဆို ဝင်လျှင် မည်သူထိုက်တန်ကြောင်းကို ရှာဖွေ၍ ထိုမြို့ရွာမှ မထွက်မသွားမီ ထိုသူ၏အိမ်တွင် တည်းခိုနေကြလော့။ ၁၂ အိမ်ထဲသို့ ဝင်သည့်အခါ အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို နှုတ်ဆက်ကြလော့။ ၁၃ ထိုအိမ်သည် ထိုက်တန်လျှင် သင်တို့မြွက်ဆိုသော ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သက်ရောက်လိမ့်မည်။ မထိုက်တန်လျှင် သင်တို့ထံ ပြန်လာလိမ့်မည်။ ၁၄ မည်သူမဆို သင်တို့ကိုလက်မခံ၊ သင်တို့၏စကားကို နားမထောင်လျှင် ထိုအိမ်မှလည်းကောင်း၊ ထိုမြို့မှလည်းကောင်း ထွက်သွားစဉ် သင်တို့၏ ခြေဖဝါးမှ မြေမှုန့်ကို ခါလိုက်ကြလော့။ ၁၅ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား တရားစီရင်ရာနေ့တွင် သောဒုံမြို့နှင့် ဂေါမောရမြို့တို့သည် ထိုမြို့ထက် ခံသာလိမ့်မည်။ ၁၆ “ဝံပုလွေအုပ်ထဲသို့ သိုးများကို လွှတ်သကဲ့သို့ သင်တို့ကို ငါစေလွှတ်၏။ ထို့ကြောင့် မြွေကဲ့သို့ ပါးနပ်လျက် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ အဆိပ်ကင်း ကြလော့။ ၁၇ လူတို့ကို သတိပြုကြလော့။ အကြောင်းမူကား သင်တို့ကို တရားရုံးများသို့ အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ သူတို့၏ တရားဇရပ်များ၌ ရိုက်ကြလိမ့်မည်။ ၁၈ ငါ့ကြောင့် သင်တို့ကိုဘုရင်ခံများ၊ ရှင်ဘုရင်များရှေ့ ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ သို့ဖြင့် သင်တို့သည် သူတို့နှင့် လူမျိုးခြားတို့တွင် ငါ့အကြောင်း သက်သေခံခွင့်ရ ကြလိမ့်မည်။ ၁၉ သင်တို့ကို အပ်နှံသောအခါ မည်သို့ပြောရမည်၊ အဘယ်အရာပြောရမည်ကို မစိုးရိမ်ကြနှင့်။ သင်တို့ပြောရမည့် စကားကို ထိုအချိန်နာရီတွင် သိကြရလိမ့်မည်။ ၂၀ အကြောင်းမူကား ပြောသောသူသည် သင်တို့မဟုတ်၊ သင်တို့အားဖြင့် ပြောသော သင်တို့အဖ၏ စွမ်းအားတော်ပင်ဖြစ်၏။ ၂၁ ထို့ပြင် ညီအစ်ကို အချင်းချင်း သေစေရန် အပ်နှံကြလိမ့်မည်။ အဖသည် သားကို အပ်လိမ့်မည်။ သားသမီးတို့သည်လည်း မိဘများကို ရန်ဘက်ပြု၍ သေစေကြလိမ့်မည်။ ၂၂ လူခပ်သိမ်းတို့သည် ငါ၏နာမကြောင့် သင်တို့ကို မုန်းကြလိမ့်မည်။ သို့သော် အဆုံးတိုင်အောင် ခံနိုင်ရည်ရှိသူသည် ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်။ ၂၃ တစ်မြို့၌ သင်တို့ကို ညှဉ်းဆဲလျှင် အခြားမြို့သို့ ပြေးကြလော့။ ငါအမှန်ဆိုသည်ကား အစ္စရေးမြို့ရွာများကို သင်တို့လှည့်လည်၍ မကုန်မီ လူသားသည် ကြွရောက်လာလိမ့်မည်။ ၂၄ “တပည့်သည် ဆရာထက်မသာ။ ကျွန်သည်လည်း သခင်ထက်မသာ။ ၂၅ တပည့်သည် ဆရာကဲ့သို့၊ ကျွန်သည် သခင်ကဲ့သို့ ဖြစ်လာလျှင် တော်လောက်ပြီ။ အိမ်ရှင်ကို ဗေလဇေဗုလ ဟု ခေါ်ကြလျှင် အိမ်သူအိမ်သားတို့ကို သာ၍ ခေါ်ကြလိမ့်မည်။ ၂၆ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို မကြောက်ကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား ဖုံးထားသမျှသည် ပေါ်လာရလိမ့်မည်။ လျှို့ဝှက်ထားသမျှကိုလည်း သိလာ ရလိမ့်မည်။ ၂၇ အမှောင်တွင် သင်တို့အား ငါပြောသည့်စကားကို အလင်းတွင် ပြောကြလော့။ တီးတိုးကြားသည့် စကားကို အိမ်မိုးပေါ်မှ ပြောကြားကြလော့။ ၂၈ ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာ သတ်၍ အသက်*ကို မဖျက်ဆီးနိုင်သောသူတို့ကို မကြောက်ကြနှင့်။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် အသက်ကိုပါ ဂေဟင်နာ*တွင် ဖျက်ဆီးနိုင်သော အရှင်ကိုသာ ကြောက်ကြလော့။ ၂၉ စာငှက်နှစ်ကောင်ကို ငွေတစ်ပြား*နှင့် ရောင်းရသည်မဟုတ်လော။ ကောင်းကင်ဘုံရှိ သင်တို့၏ အဖမသိဘဲ ထိုစာငှက်တစ်ကောင်မျှ မြေသို့မကျရ။ ၃၀ သင်တို့၏ ဆံပင်များကိုလည်း အကုန်အစင် ရေတွက်ထား၏။ ၃၁ ထို့ကြောင့် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့သည် စာငှက်အများထက် သာ၍ မြတ်ကြ၏။ ၃၂ “လူတို့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုသူတိုင်းကို ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့ခမည်းတော်ရှေ့တွင် ငါအသိအမှတ်ပြုမည်။ ၃၃ သို့သော် လူတို့ရှေ့မှာ ငါ့ကိုငြင်းပယ်သူ မည်သူကိုမဆို ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့ခမည်းတော်ရှေ့တွင် ငါငြင်းပယ်မည်။ ၃၄ မြေကြီးပေါ်သို့ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စေလွှတ်ရန် ငါလာသည်ဟု မထင်ကြနှင့်။ ငြိမ်သက်ခြင်းအစား ဓားကို စေလွှတ်ရန်ငါလာ၏။ ၃၅ အဖနှင့်သား၊ အမိနှင့်သမီး၊ ယောက္ခမနှင့်ချွေးမ အချင်းချင်းကွဲပြားစေရန် ငါလာ၏။ ၃၆ ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကိုယ့်ရန်သူ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ၃၇ ငါ့ကိုချစ်ခင်သည်ထက် မိဘကိုသာ၍ ချစ်ခင်သောသူသည် ငါနှင့်မထိုက်မတန်။ ငါ့ကိုချစ်ခင်သည်ထက် သားသမီးတို့ကို သာ၍ ချစ်ခင်သောသူသည်လည်း ငါနှင့်မထိုက်မတန်။ ၃၈ မိမိ၏ညှဉ်းဆဲရာသစ်တိုင်*ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့ မလိုက်သူသည် ငါနှင့် မထိုက်မတန်။ ၃၉ မိမိအသက်*ကို တွေ့သောသူသည် အသက်ရှုံးလိမ့်မည်။ ငါ့ကြောင့် မိမိအသက်*ကို အရှုံးခံသောသူသည် အသက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၄၀ “သင်တို့ကို လက်ခံသောသူသည် ငါ့ကိုလည်း လက်ခံ၏။ ငါ့ကိုလက်ခံသူသည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသော အရှင်ကိုလည်း လက်ခံ၏။ ၄၁ ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကို ထောက်၍ ပရောဖက်ကို လက်ခံသူသည် ပရောဖက်၏အကျိုးကို ခံရလိမ့်မည်။ ဖြောင့်မတ်သူ ဖြစ်သည်ကိုထောက်၍ ဖြောင့်မတ်သူကို လက်ခံသူသည်လည်း ဖြောင့်မတ်သူ၏အကျိုးကို ခံရလိမ့်မည်။ ၄၂ တပည့်ဖြစ်သည်ကိုထောက်၍ ဤသူငယ်တစ်ဦးအား ရေအေးတစ်ခွက် တိုက်သူ မည်သူမဆို အကျိုးမရဘဲမနေဟု ငါအမှန်ဆို၏။”
^ “ပေတရုခေါ် ရှိမုန်။” မဿဲ ၁၄:၂၈ အရ “ပေတရု” ဟုခေါ်လေ့ရှိ။ မဿဲ ၁၆:၁၆ တွင် “ရှိမုန်ပေတရု။” တ. ၁၅:၁၄ တွင် “ရှုမောင်။” ယော. ၁:၄၂ တွင် “ကေဖ။”
^ “နာသနေလ” ဟုလည်းခေါ်။ ယော. ၁:၄၆၊ ယော. ၂၁:၂ ရှု။
^ “လေဝိ” ဟုလည်းခေါ်။ လု. ၅:၂၇ ရှု။
^ “ယာကုပ်၏သား ယုဒ” ဟုလည်းခေါ်။ လု. ၆:၁၆၊ ယော. ၁၄:၂၂၊ တ. ၁:၁၃ ရှု။
^ “အနာဂတ်အသက် မျှော်လင့်ချက်။” ဂရိ၊ “ပစီးခီး။” နောက်ဆက်တွဲ ၇ ရှု။
^ မူရင်း၊ “အက်ဆာရီအွန်။” ဒေနာရိတစ်ပြား၏ ဆယ်ခြောက်ပုံတစ်ပုံ။ နောက်ဆက်တွဲ ၁၁ ရှု။